Iindaba-KOSMOS Home Textile Co, Ltd.
Isikhundla sakho sangoku: Ikhaya>iindaba
I-KOSMOS-le-127 yeCanton Fair ekwi-Intanethi
JUN15-JUN 24,2020, Ngenxa ye-COVID-19, Sabamba i-Canton Fair ekwi-Intanethi. Sibonisa iipateni zethu zakutshanje kubathengi nge-Intanethi. Baninzi abantu ababukele kwi-intanethi, kwaye sifumene impumelelo enkulu. Iimveliso zethu ezintsha zamkelwe kakuhle ngabathengi. Sikholelwa ukuba ubhubhane uza kudlula, kwaye kungekudala siza kubonisa iimveliso zethu ubuso ngobuso kunye nabathengi bethu.
I-KOSMOS-le-126 yeCanton Fair
Kwi-126th Canton Fair, i-KOSMOS iphuhlise uyilo oluninzi kwaye yatsala umdla kubathengi abaninzi baseYurophu.
IKOSMOS-Isimemo se-124 ye-Canton Fair
Ndingathanda ukumema bonke abaza kuza kujonga indawo yethu kwi-124th China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle Fair FairC GuangZhou (PAZHOU COMPLEX) Isigaba sesi-3, OCT. 31-NOV.4 2018
Isimemo se-GO TEX FAIR 2018-eBrazil
Ndingathanda ukumema bonke abaza kuza kujonga indawo yethu kwi-GO TEX FAIR 2018 ukusukela nge-11-Sep. 13 2018.
Usekela-mlawuli we-Jiangsu utyelele i-KOSMOS e-Canton Fair
Ngo-123th Canton Fair, I-Sekela irhuluneli yePhondo Jiangsu eze kutyelela umnquba yethu. Kwidokodo, uSekela-rhuluneli wathi: I-KOSMOS yenye yohlobo oludumileyo eNantong, uyilo kunye neemveliso zilunge kakhulu.
Umthengisi weLace oMkhulu weLace Embroidery
Ukususela ngo-2008, inkampani yethu iye khonaCanton Fair kangangeminyaka eli-9 Siyaziwa ngokuba yinto engcono kakhulu yokutshiza i-lace yokubeka iiseti zokulala. Abaxhasi abatsha nabakhoyo beza kwaye benza iiodolo kwimbonakalo nganye.